विश्व गल्फ खेलाडी उड्ससँग सँगै फोटो खिचाएर भाइरल भएकि यी नेपाली युवती को हुन? – PathivaraOnline
Home > गसिप > विश्व गल्फ खेलाडी उड्ससँग सँगै फोटो खिचाएर भाइरल भएकि यी नेपाली युवती को हुन?
admin May 1, 2018 गसिप, प्रवास 0
काठमाडौं, बैसाख १८, एजेन्सी । प्रतिमा शेर्पा नेपालकी नम्बर १ महिला गल्फ खेलाडी हुन् । यो साता विश्वका सर्वकालिन महान गल्फ खेलाडी टाइगर उड्सलाई भेटेको समाचारले शेर्पा सामाजिक सञ्जालमा निकै छाइरहेकी छिन् । उड्सले प्रतिमासँगको फोटो ट्विटमा पोष्ट गरेपछि नेपालमा त्यो खबर भाइरल बनेको थियो। ट्विटमा उनले लेखेका थिए, ‘आजको दिन मेरो टिमका लागि निकै हौसलापूर्ण रह्यो।
हामीले नेपालकी उत्कृष्ट गल्फर प्रतिमा शेर्पालाई भेट्यौं। हामी सबैले उनको कडा परिश्रम, मिहिनेत र लगावबाट धेरै कुरा सिक्यौं।’ विश्व चर्चित टेलिभिजन ईएसपीएनले निर्माण गरेको आफ्नो वृत्तचित्रको प्रिमियरका लागि शेर्पा अमेरिका पुगेकी हुन् । त्यही मौकामा उनले गत मंगलबार अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मेडलिस्ट गल्फ क्लबमा पूर्व विश्व नम्बर–१ गल्फर उड्ससँग प्रशिक्षण गर्ने अवसर पाएकी थिएन्।
सिनामंगलमा अवस्थित रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा प्रतिमाका आमा र बुवा मजदुरी गर्थे। क्लबकै छेउमा उनीहरुको एक छाप्रो थियो। त्यही सामान्य छाप्रोमा जन्मिएकी प्रतिमाको नेपालकी नम्बर महिला गल्फर बन्नु देखि उड्ससँग भेट्नु पछाडि प्रेरणादायी कथा छ।
छाप्रोमा बाल्यकाल विताउने क्रममा प्रतिमाले क्लबमा प्रत्येक दिनजसो गल्फरहरुले गल्फ खेलेको दृश्य देखि रहिन्। सोही दृश्यले उनलाई पनि यस खेलप्रति आकर्षित गर्यो। ठूला मान्छेहरुले गल्फ खेलेको सिको गर्दै बाल्यकालमा प्रतिमाले लठ्ठीलाई गल्फ स्टिक र ढुङ्गा बल बनाउँदै यताउता गुडाउन थालिन्।
११ वर्षकी हुँदादेखि प्रतिमा गल्फ खेल्न थालेकी हुन्। नेपाल गल्फ एशोसियसनले गल्फप्रति स–साना खेलाडीको पनि रुची बढाउने उदेश्यले उनीहरुलाई सिकाउन एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सोही कार्यक्रमका प्रशिक्षक सचिन भट्टराई थिए। जसले नियमित प्रशिक्षणमा प्रतिमाले यहाँसम्मको बाटो कोरेकी हुन्।
सो कार्यक्रममा पहिलोपटक प्रतिमाले गल्फको स्टिक समातेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा प्रतिमाको खेलप्रतिको लगाव, सिक्न चाहने गुण र आत्मविश्वास देखेपछि क्लबले उनलाई निः शुल्क सदस्यता दियो। प्रशिक्षक भट्टराईले पनि उनलाई निशुल्क गल्फ सिकाई दिने बाचा गरे।
निम्न वर्गिय परिवारमा जन्मिएकी प्रतिमाको गल्फ खेल्न चाहनालाई अभावले रोकेन्। क्लबले निः शुल्क सदस्यता र क्लबमा आउने सदस्यहरुले उनलाई पूराना खेल सामाग्री दिएर सहयोग गरे। त्यसपछि नियमित अभ्यास गर्न थालेकी प्रतिमाले छोटो करिअरमै ४० वर्ष बढी उपाधि जितिसकिन्।
अहिले उनी नेपालकी नम्बर १ नेपाली महिला गल्फर हुन्। उनी व्यावसायिक गल्फ ‘सूर्य नेपाल गल्फ टुर’को छनोट खेल्ने पहिलो महिला खेलाडी समेत हुन्। गतवर्ष उनले फाल्डो सिरिज नेपालको उपाधि जितेकी थिइन् सँगै उनी फाल्डो सिरिज ग्रान्ड एसिया फाइनलमा सहभागी समेत भइन्।
उन उच्चकोटीको व्यवसायिक गल्फ प्रतियोगिता अन्तर्गत पर्छ। प्रतिमाको लक्ष्य पनि टाइगर उड्सजस्तै बन्नेछ। तर, त्यसका लागि पर्याप्त मेहनत र अभ्यासको खाचों रहेको उनी अौल्याउछिन्।
परिवारको सुखद भविष्य बनाउन मलेसिया गएका प्रदिप विस्तारामै सदाका लागि सुतेका सुत्यै भए…